Muqdisho gabadh 'dabaq laga soo tuuray' — FAAFIYE.COM
By Editor	 On Sep 13, 2020
Sida la sheegay waxaa shalay galinkii dambe magaalada Muqdisho dabaq laga soo tuuray gabadh dhalinyaro ah taas oo u geeriyootay falkaaasi, halka ay ehelkeedu sheegeen in ka hor dilka la kufsaday. Baraha bulshada ayaa aad looga falceliyey dhacdadaasi iyaga oo dadku ay muujinayeen sida ay uga xun yihiin.
Ehelka gabadha ayaa sheegay in gabadhu shalay duhuradii ka baxday xaafada iyadoo xalay maqribbadii hooyadeed lagu wargaliyay geerida gabadheeda iyo in maydkeedii yaallo cisbitaalka Madiina. Taleefanka laga wacay hooyadeed ayaa ahaa kii ay inantu isticmaalaysay.
Gabadhan ayaa jirtay da’aadda 20 sano iyada oo kana mid ahayd ardaydii imtixaanka dugsiga sare sannadkan ka baxday. Waxaana magaceeda lagu magacaabay Xamdi Maxamed Faarax.
Xamda, ayaa magaalada Muqdisho u joogtay waxbarasho iyada oo la noolayd qaraabadeeda halka hooyadeed ay ku nooshahay Galgaduud.
Guriga dabaqa ah ee gabadha laga helay meydkeeda ayaa ku yaalla degmada Waaberi gaar ahaan waaxda Maajo waxaana uuna gurigani ka kooban yahay illaa lix dabaq. Goobta dilku ka dhacay ayaa ka fog halka ay degaan u ahayd inantu.
” Gabadha dabaqa ayaa laga soo tuuray mana xaqiijin karo in markii ay dhimatay la soo tuuray ama taa dabaqa ay u dhimatay. Laakiin gabadha nafna dhul ulama dhicin sida ay noo shegeen dadkii ka ag dhawaa.” ayuu yidhi qof ehelkeeda ka mid ah oo BBC-da la hadlay.
waxaana uu intaasi qofka ehelka u hadlay ku daray in dhakhaatiirta baadhay maydkeedii ay u sheegeen in sida oo kale la sii kufsaday.
Maxay Boolisku ka yidhaahdeen?
Dhanka kale Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay wadaan baadhitaano la xidhiidha kiiska gabadhana dabaqa laga soo tuuray. Sida ay ku sheegeen warsaxaafeed ka soo baxay.
“Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, oo ka duulayo warbixintaas ayaa goobta tagay. Isla markaasna marsiiyay nadaamka lagu maamulo goob danbi ka dhacay, waxaan biloownay baarista, aruurunta cadeymaha iyo gacan ku dhigista eedeysanayaasha oo aan gacanta ku hayno ilaa 4 Eedeysane, waxaa socota baaris qoto-dheer, waxaana si dhaw ummadda ula wadaagidoonaa natiijada Baarista oo dhameystiran. “
Afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Sidiiq Aadan Cali oo si gaara BBC-da ula hadlay ayaa isna dhankiisa sheegay in afartaa qof ee loo hayo ayna ku ekaan karin, kiiskuna uu yahay mid socda oo dad kale ay soo geli karaan.
Dhacdooyinka la xidhiidha kufsiga, gaar ahaanna kufsi wadareedka iyo dilka isku lammaan ayaan ahayn markii ugu horraysay, ayaa aad mooddaa inay ku sii badanayaan guud ahaan Soomaaliya. Sannadkii hore badhtankiisii ayay ahayd kolkii sidan oo kale uu warbaahinta qabsaday kiis ahaa gabadh yar oo la kufsaday kaddibna la dilay.
Caa’isha Ilyaas, oo 12 jir ahayd ayaa mgaalada Galkacyo meydkeeda laga helay , taasi oo laga afduubay halkaasi. Dadka deegaanka ayaa BBC-da u sheegay xilligaas in meydkan gabadhan yar la soo dhigay meel aan ka fogeyn xaafadooda. Kiiskaas ayaa abuuray hadal hayn weyn oo ku dhex baahday baraha bulshada, iyaga oo dadku muujinayey sida ay uga xumaayeen dhacdadaas argagaxa leh.
Inkastoo wacyigelin badan la sameeyay sanadihii dambe, hay’adaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn na ay ku howlanaayeen sidii wax looga qaban lahaa arrimahan ayaa haddana waxaa muuqata in marnaba aysan istaagin dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan deegaannada gobollada dhexe oo mudooyinkii dambe lagu la kacayay falal isugu jira kufsi iyo dil.
Dad badan waxay qabaan aragti ah in dhibaatadu ay ugu wacan tahay hab dhaqanka wax lagu xalliyo, bulshada oo aan daacad ka ahayn xal u helidda arrintan iyo odayaasha dhaqanka oo marwalba gabbaad u noqda dhalinyarada lagu eedeeyo falalka kufsiga iyo tacaddiyada ka dhanka ah dumarka.
Baadhisyada guud iyo warbixinaha ay sannad walba sameeyaan haayadaha la socda ilaalada iyo badbaadada dumarka, waxa ay Soomaaliya sannad walba ka gashaa kaalmaha hore goobaha ugu halista badan ee haweenku ku noolaan karaan. Goobaha dagaalladu ka jiraan ee sida Yemen, Afghanistan iyo waddammada India iyo Saudi Arabia ayaa ku weheliya liisaskaas.
Xamdi Maxamed Faarax.